Home Wararka RW Kheyre iyo Fahad Yasin oo ku wajahan magaalada Kismaanyo. Muxuu la...
RW Kheyre iyo Fahad Yasin oo ku wajahan magaalada Kismaanyo. Muxuu la xiriiraa safarkooda?
Sida MOL horay idinkuugu soo tabisay waxaa horaantii bisha Feberaayo lagu qabtay magaalada Nairobi shir lagu heshiisiinayay dowlada Fedaraalka Soomaaliya iyo Dowlad Goboleedka Jubbland.
Shirkaas ayaa waxa dowlada Fedaraalka wakiil ka ahaa oo magacaooda heshiiska ku galay Fahad Yasin. Mar la weydiiyay Madaxweyne Axmad Madoobe sababta uu ku xigeenka Hay’adda Nabadsugida (NISA) uu ula galayo heshiiska ayuu yir “dalka Madxweynhiisa runta ah oo ay talaada ka go’do waa ninkaa la yiraahdo Fahad Yasinisaga ayaana la xaajoonay”.
Kulankaas ayaa waxa ka soo baxay qodobo badan oo la isugu soo dhawenayo labada dhinac. Sidoo kale waxaa lagu heshiiyay in Xassan Kheyre iyo Fahad Yasinay safar ku tagaan magaalada Kismaanyo dabayaqada bisha Feberaayo halka Madaxweyne Axmad Madoobe uu isna ku tagi doono safar magaalada Muqadishu.
Labada dhinac ayaa u muuqdo kuwa been isku sheegayo oo ayan daacad ka ahaynin in heshiis rasmi ah laga gaaro qilaafkooda. Labada dhinac ee iska soo horjeedo ayaa mid kastaa daruufo u gaar ah ay ku qasabtay in uu heshiis raadiyo. Halkaan ka aqriso sababaha kalifay heshiiskaan iyo safarka Kheyre ee Kismaanyo.
Halkan ka akhriso maqaalkii aan hore idiinku soo sheegnay heshiiska Axmed Madoobe & Fahad Yasin